ဒါနီ ကာဗာဂျယ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဒန်ညယ် ဒန်နီ ကာဘာခဲ ရားမို့စ် (စပိန်: Daniel Carvajal Ramos) သည် စပိန် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဘောလုံးသမားတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်ကလပ်အသင်းနှင့် စပိန်လက်ရွေးစင်အသင်းတို့တွင် ညာနောက်ခံလူအဖြစ် ကစားခဲ့သည်။ ကာဗာဂျယ် ကို (၁၉၉၂)ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၁ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။
ရီးယဲလ်၏ လူငယ်အသင်းသင်းအဆင့်ဆင့်တွင် ကစားခဲ့ပြီးနောက် ဘေယာလေဗာကူဆင်အသင်းနှင့် တစ်ရာသီ ကစားခဲ့ သည်။ ၂၀၁၃ခုနှစ်တွင် ရီးရဲလ်၏ ပထမအသင်းကြီးတွင် ကစားခွင့်ရခဲ့သည်။ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းနှင့်အတူ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား၄ခု အပါအဝင် ဆုအများအပြား ဆွတ်ခူးခဲ့သည်။
လူငယ်လက်ရွေးစင်ကစားသမားဘဝတွင် ကာဗာဂျယ်သည် ၂၀၁၁ ဥရောပ ယူ၁၉ ဖလားကို ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ခုနှစ် တွင် ယူ၂၁အသင်းနှင့်အတူ ၂၀၁၃ ဥရောပ ယူ၂၁ ဖလားကို ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ခုနှစ်တွင် စပိန်လက်ရွေးစင်အသင်းနှင့် အတူ ကစားခွင့်ရခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားတွင်လည်း စပိန်လက်ရွေးစင်အသင်းနှင့်အတူ ပါဝင်ကစားခဲ့သည်။
၂ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ် ဘီ
၃ ဘေယာ လေဗာကူဆင်
ကာဗာဂျယ်ကို မက်ဒရစ်မြို့၏ ဆင်ခြေဖုံးနယ်မြေတစ်ခုတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်း၏ ဆယ်ကျော် သက်စီမံကိန်းသို့ အသက်(၁၀)နှစ်အရွယ်တွင် ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ (၂၀၁၀)ပြည့်နှစ်တွင် အသင်းကြီး၏ အရံအသင်းတွင် စ တင်ကစားခွင့်ရခဲ့သည်။ 
(၂၀၁၂)ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၁)ရက်တွင် ဘေယာ လေဗာကူဆင်အသင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့သည်။ သူသည် အဆိုပါ ရာသီ၏ အကောင်းဆုံး ညာနောက်ခံလူသုံးဦးစာရင်းတွင် ဘေယန်မြူးနစ်မှ ဖီးလစ်လမ်း၊ ရှောလ်ကေးဝ၄မှ အက်ဆူတို ယူချီဒါတို့နှင့်အတူ အရွေးခံရသည်။ 
သူသည် ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းသို့ ၂၀၁၃ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့လာသည်။ (၂၀၁၃)ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ၁၈ရက်တွင် ရီးယဲလ်ဘီးတစ်အသင်းကို ၂ဂိုး-၁ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရလိုက်သော အိမ်ကွင်းပွဲတွင် ပထမဦးဆုံးကစားခဲ့သည်။ နောက်တစ်လ အကြာတွင်လည်း ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ကစားခွင့်ရခဲ့သည်။ ပထမရာသီတွင် ကလပ်အသင်းနှင့်အတူ ၄၅ပွဲ ကစားခဲ့ရာ နှစ်ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ခုနှစ် ယူအီးအက်ဖ်အေ စူပါကပ်ကိုလည်း ကလပ်အသင်းနှင့်အတူ ဆီးဗီးလား အက်ဖ်စီကို အနိုင်ရကာ ဆွတ်ခူးခဲ့သည်။ 
၂၀၁၆-၁၇ ရာသီတွင် သူသည် အသင်းနှင့်အတူ ၂၃ပွဲ ပါဝင်ကစားခဲ့ပြီး အသင်း ချန်ပီယံဆုဖလား ရရှိအောင် ကူညီ ပေးခဲ့သည်။ တစ်လနီးပါး အရန်ခုံတွင် ထိုင်နေခဲ့ရပြီး ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဇွန်လ၃ရက်တွင် ကျင်းပသော ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲ တွင် ပါဝင်ကစားခဲ့သည်။ အဆိုပါပွဲတွင် ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းသည် လေးနှစ်အတွင်း တတိယအကြိမ်မြောက် ဗိုလ်စွဲ ခဲ့သည်။ 
၂၀၁၇ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၇ရက်တွင် ကာဗာဂျယ်၏ စာချုပ်ကို ၂၀၂၂ခုနှစ်အထိ သက်တမ်းတိုးခဲ့သည်။ 
ကာဗာဂျယ်သည် ၂၀၁၃ ဥရောပ ယူ၂၁ ပြိုင်ပွဲတွင် မာတင် မွန်တိုယာ အတွက် လူစားဝင်အဖြစ် ကစားခဲ့ရသည်။
၂၀၁၄ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက် ပဏာမကစားသမား ၃၀ စာရင်းတွင်လည်း နည်းပြ ဗင်းစင့်တီ ဒယ်လ်ဗော့စကေး က ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်ပွဲရှိသောကြောင့် ဘိုလီးဗီးယားအသင်းနှင့် မေလ(၃၀)ရက်တွင် ကစားမည့်ခြေစမ်းပွဲ တွင် ပါဝင်ကစားရန်အတွက် အခြားသော ရီးယဲလ်နှင့် အက်တလစ်တီကို မက်ဒရစ် ကစားသမားအားလုံးနှင့်အတူ ငြင်း ဆန်ခဲ့သည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် နောက်တစ်နေ့တွင် လက်ရွေးစင်အသင်း လူစာရင်းမှ အဖြုတ်ခံခဲ့ရသည်။ 
(၂၀၁၄)ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၉ရက်တွင် ကာဗာဂျယ်သည် လက်ရွေးစင်အသင်းအတွက် ပထမဆုံးအကြိမ် ခေါ်ယူခြင်းခံရ သည်။ ပြင်သစ်အသင်း၊ မက်ဆီဒိုးနီးယားအသင်းတို့နှင့် ကစားမည့်ပွဲများအတွက် ဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်အသင်းအား တစ်ဂိုး-ဂိုးမရှိဖြင့် ရှုံးနိမ့်ခဲ့သော ချစ်ကြည်ရေးပွဲစဉ်တွင် မိနစ်(၉၀)အပြည့် ကစားခဲ့သည်။
ယူရို ၂၀၁၆ ပြိုင်ပွဲအတွက်လည်း ရွေးချယ်ခံရသော်လည်း ကလပ်အသင်းနှင့်ရခဲ့သော ဒဏ်ရာကြောင့် နောက်ဆုံးလူစာ ရင်းတွင် မပါဝင်တော့ပေ။
၂၀၁၈ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလား၏ စပိန်အသင်း နောက်ဆုံးလူစာရင်းတွင် ကာဗာဂျယ် အရွေးခံရသည်။ သို့သော်လည်း အုပ်စုတွင်း ပထမပွဲစဉ်ဖြစ်သော ပေါ်တူဂီအသင်းနှင့်ပွဲစဉ်တွင် သူ ကြံ့ခိုင်မှုမပြည့်ဝသောကြောင့် အရန်ခုံတွင် ထိုင်နေရသည်။အီရန် အသင်းနှင့် ကစားရပြီး တစ်ဂိုး-ဂိုးမရှိဖြင့် အနိုင်ရရှိသော ဒုတိယပွဲစဉ်မှသာ ဝင်ရောက်ကစားခဲ့သည်။
↑ "Dani Carvajal: "Nací siendo del Real Madrid"" [Dani Carvajal: "I was bornaReal Madrid fan"]. Marca (in Spanish). 24 May 2013. Retrieved 24 October 2012.
↑ "Team of the season 2012/13". Bundesliga. 25 May 2013. Retrieved 1 June 2013.
↑ "Isco an instant hero". ESPN FC. 18 August 2013. Retrieved 29 November 2013.
↑ "Majestic Real Madrid win Champions League in Cardiff". UEFA.3June 2017. Retrieved4June 2017.
↑ "Ceremony to mark Carvajal's contract renewal". Real Madrid C.F. 17 September 2017. Retrieved 18 September 2017.
↑ "Spain beat Netherlands to top Group B". UEFA. 12 June 2013. Retrieved2June 2014.
↑ Del Bosque waits to name 23". FIFA. 25 May 2014. Archived from the original on 28 May 2014. Retrieved2June 2014.
↑ "Vicente del Bosque has announced the 23-man squad for the matches against France (September 4th) and Macedonia (September 8th)". Royal Spanish Football Federation. 29 August 2014. Retrieved 29 August 2014.
↑ "France 1–0 Spain". BBC Sport.4September 2014. Retrieved6September 2014.
↑ "Dani Carvajal se pierde la Eurocopa 2016" [Dani Carvajal misses 2016 European Championship]. El País (in Spanish). 30 May 2016. Retrieved 30 May 2016.
↑ "Cristiano Ronaldo scores sensational hat-trick as Portugal hold Spain in instant World Cup classic". The Daily Telegraph. 15 June 2018. Retrieved 20 June 2018.
↑ "Diego Costa scores again, Spain beats Iran 1–0 at World Cup". The New York Times. 20 June 2018. Retrieved 20 June 2018.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဒါနီ_ကာဗာဂျယ်&oldid=525128" မှ ရယူရန်
၂၀၁၈ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလား ကစားသမားများ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ ဇူလိုင် ၂၀၂၀၊ ၁၉:၂၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။